‘ध्रुवे’ हात्तीको अनौठो प्रेम ! :: a1nepal.com.np
हात्ती तीर्थमान कलीसँगै ध्र’वे हात्ती चितवन राष्ट्रिय निक’ञ्जको स’खीभार पोष्ट नजिक आइतबार निक’ञ्जको पोथी हात्ती तीर्थमान कलीसँगै ध्र’वे हात्ती । सो हात्तीले पाँच वर्षअघि १५ जनाको ज्यान लिएको बताइएको छ । तस्वीर : नारायण अधिकारी, चितवन, रासस
उहाँका अनुसार उमेर पुगेर उन्मत्त हुँदै गएपछि समूहबाट छुटेर पोथी हात्ती खोज्ने क्रममा ध्रुवे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएको हो । जुन ठाउँमा ध्रुवे थियो सो क्षेत्रमा रहेका अन्य भाले हात्तीका कारण पोथी नपाएपछि ध्रुवे मात्तिएको बेला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आउने गर्दछ । राजधानी दैनिकबाट साभार
मासिक ३ लाखको गाैं मुत्र बिक्री ! विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा अटिजम सचेतना दिवस मनाइयो बेहुलो भाग्दा ३५ लाख जरिवाना, बेहुली फिर्ता समाजमा महिला हिंसासँगै बढ्यो पुरुष हिंसा पनि … राष्ट्रपतिका लागि अाज मनाेनयन – दोहोरिँदै विद्यादेवी, काँग्रेसले लक्ष्मी राईलाई उम्मेदवार गराउने उपत्यकाका पाँच अस्पतालमा प्रहरीको छापा, १७ नक्कली डाक्टर पक्राउ जेलबाट भागेका ‘टिके डाँका’ माथी प्रहरीद्वारा गोली प्रहार औंला काट्नेलाई थुनामा राख्न आदेश, छुटाउन पिडितकै हारगुहार पूर्व डिआईजी सिलवालका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी एकताको प्रक्रियाबाट फर्किने पुल भत्किसक्यो : दाहाल
← जर्मनीका राजदुत रमेश खनाल सर्वियाका पनि राजदुत	पत्नीको सहमतिबेगर राखिने यौनसम्पर्क वैवाहिक बलात्कार नहुने →